Alaskan Klee Kai Imbwa Inobereka - Chokwadi uye Hunhu - Inobereka
Alaskan Klee Kai Imbwa Inobereka - Chokwadi uye Hunhu
Iyo Klee Kai yakaverengerwa pasi kubva kuSiberia neAlaskan Huskies, pamwe nerubatsiro rweSchipperke neAmerican Eskimo kudzikisira pasina hushoma. Saka nekudaro iwe unowana iwo iwo maitiro akafanana anowanikwa mune huskies.
Ivo vanoda kuziva, vakasimba, vane simba rakakura pahukuru hwavo, vavhimi vane hunyengeri uye vanopunyuka maartist. Iyo Klee Kai imbwa ine simba kwazvo; zvisinei, kwete iyo inowanzo 'hyper' imbwa diki. Ivo vakanaka uye vanozvikudza.
Zita rekuti 'Klee Kai' rinotorwa kubva kuEskimo mazwi anoreva 'imbwa diki'. Kune dzinosvika mazana mashanu embwa idzi dziripo munyika.
Kuchengeta uye Kudzidziswa
Klee Kai National Kennel Kirabhu uye Kununura
Klee Kai National Kennel Kirabhu Yakajairwa
Paive nekukanganisa netsaona kuOklahoma pakati pemakore '70. Linda Spurlin, anovandudza werudzi rweKlee Kai akaona iyi imbwa diki yaitaridzika saHusky uye akafunga kuti iyi ndiyo ichave imbwa yakakwana saizi imbwa.
Panguva imwecheteyo, mukoma wake muAlaska akawana iyo imbwa yakadaro uye akafungawo kuti yaive imbwa diki yakakwana. Nekudaro, ivo vakatanga nezvekugadzirisa rudzi. Gare gare, Linda akaenderera ega mushure mekutenga hama yake uye apa ndipo pakatanga kubudirira chaiko.
Akapedza makore ekutanga aya asina kana kudzoka pane yake mari, achida izvi zvisikwa zvidiki zvaakasika. Aive nenguva dzakaoma uye makore ebasa akaisa mari. Akatengesa imbwa yake yekutanga kuitira kubereka muna Zvita 1988.
Nguo uye Kushambidzika
Iyo Klee Kai, kufanana neSiberian Husky, iri nyore kutarisira. Ivo vakanyanya kuchena. Vazhinji havadi tsoka dzakanyorova uye vachapedza maawa zuva nezuva vachizvishambidza.
Ivo havana 'hwema hwembwa' uye havana 'imbwa yekufema.' Mazhinji Klee Kai haawanzo kuda kugezwa.
Sezvakaita muAlaskan Husky nemaSiberia uye kusiyana nedzimbwa dzine vhudzi pfupi dzinodurura gore rese, iyo Klee Kai inofuridza jazi rayo kaviri pagore. Ehezve, kukura kwembwa kunogumira huwandu hwehuswa hwakapepereswa; zvisinei, zvichiri zvinotyisa.
Zvakanakisa kushambidza imbwa nguva dzose panguva ino. Dzimwe dzembwa dzine vhudzi refu dzinogona kukwikwidzwa kana dzikasashongedzwa. Mazhinji Klee Kai anobatsira kurasikirwa nevhudzi nekusveta zvinhu zvakadai semazaya.
Zvimwe kunze kweiyi nguva yejasi rinoputika, iyo Klee Kai inozvigadzirira kwazvo. Matanho akajairwa ekudzivirira anofanirwa kutorwa, sekuchekeresa kwembambo, kushambidzika kwakajairwa nenzira yekukwesha. Maitiro aya anonyanya kukosha mukubatanidza.
A Klee Kai mumba mako zvinoreva kuti hausi wega. Ivo vanoita kuti iwe useke kunyangwe iwe usingade uye unogona kunyaradza moyo wakashungurudzika chero chikonzero.
Ivo vanove yakakosha chikamu chemhuri iyo inosarudza kutora imwe. Ivo vanowanzove vari vega kana zvasvika kune vausingazive uye vane pfungwa dzavo.
Iyi imbwa yakangwara kwazvo. Ini ndatoona imbwa yechirume isina kuruka ketani yekubatanidza fenzi kuti isvike kune mukadzi padyo naye. Ndakaona munhukadzi achidhonza ruzhowa mukati kuitira kuti mukono ugosvinwa pasi peruzhowa.
Vanoda kugara nevanhu vavo. Kana vakaiswa mumamiriro ekunze asingafadzi kwavari, ivo vanowana nzira yekubuda mairi.
Kusiyana neSiberian Husky, iyo Klee Kai inomira uye inofungira vausingazive. Ivo vanoita zvakanyanya kunaka vatariri. Ivo vanokuzivisa iwe kana mumwe munhu aripo uye asingawanzo kuhukura pasina chinhu.
Ndine chokwadi chekuti vaizopa hupenyu hwavo kuchengetedza vadiwa vavo. Klee Kai haafarire kubatwa setoyi. Vanoda kubatwa neruremekedzo. Sezvo vana dzimwe nguva vachikanganisa chishuwo icho, vana chete vanoziva mabatirwo emhuka ndivo shamwari dzavanofarira.
Idzi imbwa dzinowanzo kuve imbwa diki ine hasha kana isina kusangana zvakanaka. Naizvozvi, ndinoreva kuratidza kuti iyo Klee Kai inogona kuve yakanaka kune imbwa dzisingazivikanwe sekureba sekunge mutorwa aine vavariro dzakanaka. Iyo Klee Kai inowanzozvishingisa yakatenderedza imbwa dzisingazivikanwe asi inodzoka nerudzi chero zviito zvehasha.
Klee Kai haagadzikane kana tenzi wake asipo. Ivo vangangoda zvavo kufamba naye / iye uye vachizviita nyore kudaro. Mufananidzo weKlee Kai unenge usina kukwana pasina kuendesa rudo rwake uye nerudo rwekuda tenzi wake uye nhengo dzemhuri.
Klee Kai ndivo vavhimi. Kana ikasimudzwa kana kuunzwa nenzira kwayo, Klee Kai anogona kugara nekatsi uye mumba ine shiri. Ehe, zvingave zvakangwara kuti muridzi asasiye shiri dzichimhanya dzakatenderedza imba, kana kusiya Klee Kai isina kuchengetwa mukamuri rine magerbils, hamsters, nezvimwe.
Hunhu hwavo hwekuvhima hwakanyanya uye ivo vanozivikanwa kuita chikafu chavo. Pane imwe nguva ndakanga ndiine gerbil inomhanya ichitenderedza mune imwe yeaya mabhora akajeka, iyo Klee Kai yaive mumba uye ini ndaive pafoni.
Ndakanzwa imbwa ichirovera bhora kumativi asi ndakafunga kuti gerbil yakanga yakachengeteka. Chinhu chinotevera chandinoziva, muzukuru wangu anouya achimhanya mumba achichema kuti Sitka arikudya gerbil. Ndiyo yakave gerbil yekupedzisira mumba medu.
Ini ndakavewo nemumwe weavo vaikwira kukwira pamusoro peshiri reshiri raive rakarembera pachigadziko. Iye akangokwira pamusoro petafura achibva asvetukira pamusoro pekeji.
Ndakave neKlee Kai yakawanda yakaiswa mudzimba umo maive nekatsi, ndakatova nemadhamu mukoti akasiya makitsi. Nekudaro, kune zvimwe izvo zvisingagoni kuvimbwa nazvo. Ini ndinowanzoziva imbwa idzo dzisati dzabuda mumba mangu.
Kuhukura, Kutaura, uye Kuungudza
Sezvambotaurwa pamusoro, iyo Klee Kai haisi yekujairira kuhukura. Ivo vatauri uye dzimwe nguva vanoyeuchidza varidzi vavo nezvekugara nevechidiki. Iyo Klee Kai inoda kuve neshoko rekupedzisira, kunyangwe sezvavanoteerera rairo yavari kunyunyuta nayo.
Klee Kai ari puckish sezvakaita iye Husky. Kazhinji, iwe unogona kuwana kennel yaKlee Kai vachiimba pamwe kungave mangwanani-ngwanani kana husiku apo macoyotes ari padyo zvakanyanya. Ivo vanotanga uye vorega kuungudza sekunge varikuziva. Ivo zvakare vanowanzo kunge vari vepfungwa.
Ivo vanoziva kana nguva yekudyisa iri, kunyangwe kana ichi chisiri chiitiko chakarongwa. Vanogona kuona kana paine chakashata kunyangwe pavanobviswa mumhuri semuma kennels.
Ndakaona kuti rudzi urwu runonyanya kuita chikafu chinosanganisira huku nemupunga. Vanoda chikafu chekutanga. Hapana chakachipa imbwa chikafu kwavari. Zita rakanaka zita rinonyanya kunaka. Ivo vanoda mafuta akawanda kuti vape simba kune avo antics.
Iyo Klee Kai inodya munharaunda. Kana vakakwidziridzwa mumatumba, vanowanzo dya zvakanak apo vachichengetwa asi vanowana huremu hwehuremu hwavo kana vari mumba nemhuri yavo.
Kazhinji kutaura, zvakanakisa kupa mbudzana pane imwe nguva kuti ifambise 'poto kudzidziswa'. Mbwanana dzinofanirwa kupihwa chikafu kanenge katatu pazuva. Vakuru vanogona kupihwa chikafu kamwe pazuva.
Vazhinji vanhu vane Klee Kai vanozozvidyisa kana imbwa yadzidziswa dzimba. Ivo havasi 'chow pasi' uye vanowanzo kuve vanodya munharaunda. Nekuda kweizvi, havawanzo kupfeka huremu hwakawandisa. Idzi imbwa dzinofarira michero nemiriwo senge pizi, chibage, mapichisi, mabhanana, fashaidza fry, uye mamwe akawanda marudzi.
Klee Kai akanyanya imbwa yemhuri. Vanogona kumira kutonhora sezvazvinoratidzwa nenyaya yekuti ivo vakagadziriswa muAlaska. Imba yavo chaiyo paive neimba yembwa yakazadzwa nehuswa.
Nekudaro, ivo vanofara kwazvo nevanhu vavo. Doggie madhoo akanaka kune imbwa idzi. Vanoda kuve vanokwanisa kuuya kuzotarisa vanhu vavo pano neapo. Ivo vakanaka kwazvo nevana vadiki uye kunyangwe vacheche.
Pakave nemishumo yeKlee Kai akatarisa mwana mumba achibva abuda kunotora mubereki kana mwana achichema. Pakave nemadhamu aiyamwisa makiti.
Masvingo haazobati isingafadzi Klee Kai. Vazhinji Klee Kai avo vakadzoserwa nemhuri dzavo vakabva kumusha wakaguma wapatsanurwa. Ivo vane hanya zvakanyanya nekusawirirana uye havazvifarire.
Ivo zvakare vachasiya imba kwavanochengetwa muyadhi vasina kushanya kumba kuti vave nemhuri dzavo. Izvo zviri nyore kennel kana crate yakadzidziswa; zvisinei, usavakiyire mukamuri. Masvingo nemadziro akagadzirwa kuti apfuure, pasi kana kuburikidza.
Sezvakaita naSiberia Husky, yadhi yakakomberedzwa inodiwa kune imbwa yekunze. Fenzi inofanira kuva yakasimba uye yakareba mamita matanhatu. Panofanira kunge paine waya muvhu kutadzisa kuchera kunze.
Klee Kai anofarira kuchera matako; nokudaro, chingave zano chakanaka kuve nenzvimbo inobvumidza chiitiko ichi pasina kuparadza yadhi yese. Sezvakaita imbwa dzese, nzvimbo yekennel inodikanwa kune imbwa ine tsika yekutiza.
Iyo kennel nzvimbo inofanira kugadzirwa neketani yekubatanidza, pamusoro pekongiri pad. Iyo fenzi inofanirwa kunge yakareba mamita matanhatu uye yakafukidzwa kubvira Klee Kai vari kukwira. Vachada imba yembwa asi vachapedza yakawanda yenguva yavo vachizvidzivirira pachavo pamusoro pemba.
Ivo vanofarira kuve 'Mambo weGomo' uye saka gara uchisarudza iyo yepamusoro nzvimbo inowanikwa kune perch.
Kunyangwe hazvo imbwa idzi dzakaburitsirwa pasi kubva kuAlaskan Husky nemaSiberia, dzinoita imbwa dzinoteerera kwazvo. Ivo vakangwara zvakanyanya asi vanoda kufadza varidzi vavo.
Iko kusanganisa kunoguma imbwa iyo inogona kudzidza chero nezve chero chinhu. Unofanira kutanga kuteerera pakutanga. Gadzira iyo mitemo uye unamatire pairi. Rega wako Klee Kai azive kuti ndiwe mukuru.
Usarega imbwa yako ichiita chimwe chinhu sembwanana chausingade kuti iye aite sevakuru. Kana iwe ukapa kana kamwe chete, iwe wakasimbisa kuti iyo mitemo yakaitwa kutyorwa.
Paunenge uchinge wadzidzisa imbwa yako kuita imwe hunhu, tarisira iye / iye kuti azviite nguva dzese, saka usamurega iye aite chero chinhu chausingade kuti aite nekuti zvinozonetsa kugadzirisa iko kudzidziswa.
Klee Kai vane paketi yakatarisana; Naizvozvo, iwe unofanirwa kuzvisimbisa semutungamiri wepakiti. Izvo hazvina basa kuti uite alpha roll iyo inowanzo kutaurwa nezvayo. Iwe unongofanirwa kukurudzira rukudzo, kwete kushungurudza imbwa mukuzviisa pasi.
Zano iro rinogona kuita imbwa ine hasha, isingatarisirwe. Bata imbwa yako nerukudzo uye tarisira zvakafanana. Kana iwe ukadzidzisa mbwanana yako nenzira kwayo iye / iye anokutevera iwe chero kupi.
Mutsinga iyoyo, makirasi ekudzidzisa haangodzidzise mbwanana kushamwaridzana uye kupindura kwauri kunyangwe zviine zvinokanganisa, asi zvakare zvinodzidzisa iwe nevamwe vese vari mumhuri mirairo chaiyo yekushandisa uye maitiro ekuita kuti mwana wako apindure. Kusachinja-chinja kwakakosha uye makirasi ekudzidzisa anopa mhuri nzvimbo yekudzidzira nemumwe munhu aripo kuti asimbise nzira dzakakodzera dzekudzidzisa.
Iyo yekudzidzira nguva zvakare chiitiko chekubatanidza. Iwe uchaona kuti yako Klee Kai inoda kuve yakanakisa pane zvese. Icho hunyengeri kune imbwa yakanyatsodzidziswa iri kuvandudza tsika dzakanaka, kutanga nezvazvo. Kana hunhu hwaunoda hwava hunhu, imbwa haigone kutyora rairo.
Kubudirira kwembwa idzi idambudziko guru. Zvese zvavanofanirwa kuita kutarisa imwe imbwa ichiita paA-furemu kana Bridge uye ivo vanotevera vasina hutungamiriri hwevanhu. Iyi ndiyo mhando yekudzidzira iyo inonakidza uye inogadzira. Vese muridzi nembwa vanonakidzwa nekudzidza nekutevera mirau.
Uchaona kuti kupikisa imbwa yako ndiyo nzira yakanakisa yekumuchengetedza kuti arege kufinhwa uye kupinda mumatambudziko.
Chinhu chakaipisisa chaungaite kukanganisa imbwa diki dzinokosha idzi. Vanhu vazhinji vanowana imwe yeiyi imbwa uye vanoibata se 'mucheche' wavo. Imbwa hadzinzwisise basa radzo kana zvichifanira kuve mwana wako.
Iyo imbwa uye inongoziva chete kuva imwe. Kana iwe ukaiswa mune iyi mhando yechinzvimbo, imbwa yako inogona kuve yekuda, ine hukasha uye kazhinji isingafadzi kuve uripo.
Idzi imbwa dzave dzakasununguka zvisingaite nehutachiona hurema. Isu tinongobvumidza vafudzi vakakomba kutenga imbwa dzisina-neutered. Yese mbwanana inotengeswa pazvibvumirano zvepais / neuter, kubatana-muridzi kana kune vanobvumidzwa vakura.
Ini ndinotenda kuti ichi ndicho chikonzero chekushaikwa kwezvikanganiso. Isu takave neapo neapo shaya yepasi pasi, cryptorchidism uye munguva yakapfuura pane imbwa dzaifanira kubviswa mazino evana dzisingabude. Pave paine imbwa dzairarama panguva yavanofanirwa kunge vakafa. Ivo imbwa yakasimba yakasimba.
Dzimwe nguva kunyara kunogona kuve dambudziko: vese vabereki vanofanirwa kuve vanoshamwaridzana uye vane hushamwari uye vasaratidze hunhu hwekunyara kana kutya (kwete kutsauswa nekusagadzikana).
Kunyatsoteerera kunofanira kubhadharwa patella. Zviri nyore kwazvo kukudziridza patellas dzekunakisa imbwa diki, nekudaro, kutarisirwa kwakanyanya kunofanirwa kupihwa kune angangoita maitiro mune edu ekuberekesa stock. Iwe unofanirwa kutarisa kuti chero mwana wauri kufunga akave nevabereki vake vakavhenekerwa patellas yekunakisa nachiremba wemhuka.
Nekudaro, vafudzi vazhinji vanongwarira, uye nekuda kweichi chikonzero, Klee Kai ane dambudziko zvinoshamisa pasina kurapwa kwekutaura.
Vakazviwana sei zvishoma kudaro?
Kana rudzi rwacho rwuchangotanga isu tinotenda kuti Schipperke uye American Husky yakashandiswa kuunza saizi yeSiberia neAlaskan Husky pasi.
Unogona here kuwana Klee Kai ane maziso ebhuruu?
Ehe, Klee Kai anogona kuva ne rimwe kana ese maziso ebhuruu. Ivo vanogona zvakare kuve neziso iro rinongova chikamu chebhuruu uye chimwe chikamu chine brown. MuSiberia izvi zvinodaidzwa kuti 'ziso reziso', 'parti ziso', kana 'ziso rakakamurwa.'
Hapana chakaipa neziso: iyo imbwa inogona kuona zvakakwana zvakajeka. Ichi chiito chakajairika muSiberian Husky uye muKlee Kai.
Imbwa diki diki dzakapusa uye dzakapenga, ko Klee Kai mafambiro akaita sei?
Klee Kai ane imbwa hombe kuhukura. Dzimwe nguva tinowana yekuchema kana bugler sekudaidza kwandinoita. Iyi toni inochengeterwa alarm. Klee Kai imbwa dzakabatikana, asi kwete hyper. Ivo vari impish uye vanogadzira.
Vachaita kuti varidzi vavo vagare pazvigunwe zvavo. Zvakarehwa kuti imbwa imwe yakakwanisa kupinda mumuchina wekuwachira ndiro paive pakavigwa mushonga. Ivo vakaita sekunge vane 2-gore-gore kwehupenyu.
Klee Kai anomira sei kutonhora?
Sezvo rudzi rwakagadzirwa muAlaska, ivo vakasimba kwazvo uye vanoshivirira kutonhora. Muchando vanochinjanisa iyo paw iri pasi, nekudaro vachideredza mikana yechando.
Iwe unozoona kuti iyo Klee Kai yakapetwa kaviri. Kachena uye chena Klee Kai ichave nechena jasi. Klee Kai nhema uye chena ichava nejasi jena. Mhumhi grey uye chena Klee Kai ichave neyegrey undercoat.
Tsvuku uye chena Klee Kai ichave nechena jasi. Iyo undercoat yakakosha pakudzivirirwa kubva kunotonhora uye kupisa. Mvere refu dzakachengetedza dzinodzivirira iyo Klee Kai kubva kuhunyoro. Kaviri pagore iyo Klee Kai ichadurura jasi rayo repasi kweanopfuura maviri kusvika matatu mavhiki.
Ndiri kugara kuMexico, ko Klee Kai achaita sei munguva inopisa?
Klee Kai sedzimwe imbwa dzinoda mvura yakawanda uye mumvuri munguva yezhizha. Dziva rekushambira remwana inzira yakanaka yekuti imbwa itonhorere. Kuchengeta imbwa mumotokari, crate kana chero imwe yakavharirwa munguva yezhizha kunogona kukonzera kupisa kupera.
Pasina kutenderera kwemhepo, imbwa muviri wayo kupisa kunogona kuve kwakanyanya. Sezvimwe neimwe imbwa, usanyanya kupisa imbwa nekukurudzira kunyanyisa kuita maekisesaizi mukati mekupisa kwezuva.
Klee Kai anofarira kudya chando, uye kunyanya kuifarira munguva yezhizha. Iyo Klee Kai ichadurura jasi rayo zhizha risati rasvika uye haidi kuveurwa. Izvi hazvidiwe uye zvinoodza moyo.
Kungwara kunofanirwa kukunda, usaise imbwa yako mune iyo mamiriro iwe iwe yausingakwanise kutsungirira.
Vari sei nevana?
Klee Kai ude vana uye uite zvakanaka navo chero bedzi mwana akadzidziswa kuremekedza imbwa uye kwete kuitsvinyira. Idzi imbwa idiki diki zvekuti mwana asingadzoreke anogona kuva tyisidziro yakakomba.
Vazhinji Klee Kai vaizopa mwana mukana wakakwana zvekuti mwana anogona kukuvadza zvakanyanya imbwa isati yamhanya. Varidzi vakanaka vanoita imbwa dzakanaka. Vanoratidzika kunge vane iyi pfungwa yechitanhatu nezve zvinangwa zvemwana uye vanowanzo dzivirira mwana ane vavariro dzakaipa.
Yadhi yakakura here kukwana Klee Kai?
Ehe, kunyangwe ivo vachida yakawanda yekurovedza muviri, ivo vanozozvizadzisa izvi mune yakanaka saizi yadhi. Kana paine imbwa dzinopfuura imwe chete, vanozotamba vachidzingirira. Kana zvisiri, vanozodzingirira shiri kana shiri mimvuri, hwiza, nyoka, kana chero chinhu chinoratidzika kunge chinofanira kudzingirirwa.
Ivo vanogona zvakare kuchengetwa mufurati, ivo vakafudzirwa kuve furati yakakura saizi kana muridzi ane chokwadi chekufamba imbwa kanokwana katatu pazuva.
Ehe, ivo vanoteura kaviri pagore. Vanoridza bhachi ravo nguva dzese uye vanoda kukwesha kwakawanda panguva ino. Ehezve, kana iwe uri kutarisa kune gumi kusvika makumi maviri-pondo imbwa, hapana kana ingangoita yakawanda seyevhudzi seyakagara akaenzana husky.
Ndine ma allergies uye imbwa idzi hadziwedzeri, saka vamwe vanhu vari allergic kune imbwa vanogona kukwanisa kutsungirira idzi, pamwe nekuti imbwa dzakachena kudaro.
Vari sei nedzimwe imbwa?
Vazhinji, kwete vese, Klee Kai vane hukasha kune dzimwe imbwa kunze kwekunge dzave nehukama sembwanana. Idzi imbwa dzinowanzo sarudza hunhu hwembwa yakura kana ikasimudzwa yakatenderedza imwe.
Zvidiki sei ivo?
Ivhareji Klee Kai iri pakati pegumi nemakumi maviri emapaunzi, uye gumi nemaviri uye gumi nemashanu masendimita.
Ndiani asingafanire kuve neKlee Kai?
Chero ani anoda kubata imbwa yake semwana wavo ari kukumbira dambudziko. Chero ani asingagone kumira bvudzi haafanire kuve neKlee Kai. Chero ani asingagone kumira doggy kutsvoda zvirokwazvo haadi Klee Kai.
Chero ani zvake asingakwanise kuenderana haafanire kuve yake Klee Kai. Chero ani zvake asingade kukwevera kutarisa kwaari nekuti munhu wese anoona Klee Kai anoda kuziva kuti chii, kwavanogona kuwana imwe uye kuti yakadhura zvakadii kana chero munhu anongoda chiratidzo chemamiriro.
Rudzi urwu rwunozivikanwa neAKC here?
Isu takanyorera kuzivikanwa kweAKC uye takamirira mhinduro panguva ino iripo. Isu takave nevanhu vazhinji vari kuda kubereka iyo Klee Kai, iyo inodawo kugona kuratidza imbwa dzedu, nekudaro iko kunyorera.
Tiri kutarisawo kune vamwe vanhu kune dzimwe nyika vanoda kupinda muchibereko asi vasingakwanise kushandisa chero imwe nzvimbo kunze kweAKC neFIC kuratidza imbwa dzavo. Nekuda kupa yakanakisa mamiriro ezvinhu kune vanhu pasirese, ini ndinofunga zviri mune zvatinonyanya kufarira kuve nehukama neAmerican Kennel Club.
Klee Kai National Kennel Club ichiri kuda kuti imbwa dzese dzipfuure nzira iripo kuitira kuti inyoreswe semhando yekuberekesa kana kuratidza imbwa dzemhando yepamusoro.
Klee Kai National Kennel Club yakaumbwa muna Nyamavhuvhu wa1995. Iyi yaive nguva yekutanga kuti mureza uvhotwe uye mitemo yemitemo yakaumbwa. Panguva ino chaiyo, iyo kirabhu inosangana zviri pamutemo kamwe pagore kuKlee Kai Picnic.
Musangano uye pikiniki zvakabatanidzwa. Tine nhengo zhinji muUSA yese. Ndinofunga mune ramangwana, ndinoda kuronga misangano yenyika paInternet.
Panguva ino, rudzi urwu rwutsva zvekuti hapana mabhuku anogoverwa nezve Klee Kai. Iyo yepedyo iwe yaunogona kuwana ingave yekutora bhuku reSiberia Husky. Zvimwe zvinhu zvakasiyana, asi ruzhinji rwezvaunoverenga nezvazvo zvicharamba zviri zvechokwadi neKlee Kai.
Klee Kai haatize kubva pamusha wakanaka uye havakanganise vanopinda seshamwari.
Iyo yemhando yekubereka ndiyo nzira, kana uchida, yemuenzaniso wakanaka werudzi irworwo. Iyi standard ndiyo mota inoshandiswa kutonga imbwa dzese dzerudzi irworwo. Ose mabheya akanaka anovavarira kuuya padhuze nekukwanisika sezvinobvira.
Chinangwa Chekutanga: Iyo Klee Kai yakagadzirwa seye shamwari imbwa naLinda Spurlin.
Kubereka Nhoroondo: Idzi imbwa dzakaburitsirwa pasi kubva kuSiberia uye Alaskan Huskies.
Pakutanga Nhoroondo: Pakati pa1970
Nyika Yakatangira: United States of America, kunyanya Wasilla, Alaska.
Iyo Klee Kai imbwa diki yekumba, inokurumidza uye yakajeka patsoka dzake uye yakasununguka uye inoyevedza inofamba. Muviri wake zvine mwero, wakakora muviri, nzeve dzakasimudza, uye muswe wakaita segava unoratidza nhaka yake yekuNorth, semuSiberian Husky.
Muviri wake kukura uye chimiro zvinoratidza yake yakakosha nhaka yechiyero chesimba, kumhanya, uye kutsungirira. Kudhonza isimba rakasimba uye kunogona kuitwa muchiyero kunyangwe neiyi imbwa diki.
Mune mamiriro akakodzera, iyo Klee Kai ine musimba wakasimbiswa musimba uye haina kutakura huremu hwakawandisa.
Iyo yekumeso masiki hunhu hunosarudzika hwerudzi urwu uye hunofanirwa kunyatso kuoneka nekuda kwekusiyana kwemavara. Musanganiswa wakasiyana wemask mark unogoneka. Iyo yakazara maski kuve iine musiyano wemuvara pamusoro, pasi pemeso, pasi pemhino uye kuumbiridza kumeso.
Chifukidzo chekota-matatu chakafanana asi chisina ruvara pasi peziso. Hafu masiki iri kushaya ruvara pamusoro nepasi pemaziso, Chirikadzi Peak rinova rinonyanya kudiwa rinongova nemusiyano weruvara mumusoro uye kuumbiridza kumeso.
Iyo yakapusa inopesana, kumeso nzvimbo inofanirwa kutambanudza kumashure kuvhara mapfupa eshaya uye pasi kufukidza nzvimbo iri pasi pechirebvu. Izvo hazvimanikidzi, asi zvinodikanwa kuve nemwenje yakajeka pamusoro pemeso. Izvo zvakare zvinosungirwa kuve nerima tambo pasi pakati penzvimbo.
Moto unopisirwa pakati pehuma kana muromo unobvumidzwa. Iyo fururu iri mukati mezeve inofanira kunge yakafanana neyakareruka inopesana nemuvara seye kumeso kumeso.
ZVINOKOSHA: Bhuzhi rine vara rakafanana nzira dzese kudzika nemhino, kana kuve nekavara kadiki kemusiyano pamusoro pemiromo (senge mune mask fox). Ruvara ruri pasi pemeso rwunotambanudza inopfuura hafu yenzira kusvika kumagumo emhino (senge mune mask fox).
Ruvara ruri pasi pemeso rwunotambanudza inopfuura hafu yenzira kusvika kumagumo emhino (sekunge mune isipo kana isina kuenzana maski).
Kureba uye Kurema : Kureba kunoyerwa kubva kuoma kusvika pasi. Iyo Klee Kai inofanirwa kuve yakaenzana saizi, uye isingaoneke kunge inorema kana yakatetepa.
Toy - kusvika uye inosanganisira gumi nematanhatu masendimita.
Miniature - Kupfuura gumi nematanhatu inches uye kusvika uye kusanganisira 15inches.
Standard - Anopfuura gumi nemashanu masendimita kusvika uye kusanganisira gumi nemasere.
Oversize - Anopfuura gumi nemasere masendimita kusvika uye kusanganisira gumi nemasere.
Kana chikamu chakakura ichi chichienderera mberi chichikanda imbwa dzakakura kupfuura zvino bvumirwa neyakajairwa, saka iye / iye anofanira kurasikirwa nemamiriro ake ekuberekesa asi kwete ayo ekuratidzira mamiriro. Kana muridzi akatyora chirango chembwanana kumhuka iyi anobva arasikirwa nehunhu hwayo hwekuratidzira.
Kurema kuri kuenderana nekukwirira.
Izvo zviyero zvataurwa pamusoro zvinomiririra iyo yakanyanya kukwirira miganho, pasina sarudzo yekupa kune yakanyanyisa.
KUSANGANA : Imbwa nekurumwa pamusoro pegumi nemasere pakasvava.
Maziso - Almond yakaumbwa kana denderedzwa kusvika zvine mwero kutenderera, zvine mwero zvakapatsanurwa. Matauriro acho ane shungu, asi ane hushamwari, anofarira uye anototyisa, akavhurwa akapenya uye akajeka.
Ruvara rwemaziso - inogona kunge iine shava kana bhuruu muvara, imwe yeayo kana epi-mavara inogamuchirwa.
Zvikanganiso: Maziso akaseta zvakanyanya kusaenzana; seta padhuze padhuze nepadhuze, kutenderera kunge kuoneka kuputika.
Dehenya - Yehukuru hushoma uye zvakaenzana nemuviri, yakatenderedzwa zvishoma pamusoro uye ichitetepa zvishoma nezvishoma kubva panzvimbo yakatambanuka kusvika kumaziso. Inofanira kuyera mashanu-masere kusvika hafu ye musoro kubva kubva pakamira kuenda kune occiput.
Kumira kunofanirwa kutsanangurwa zvakajeka asi kusanyanyo nyura. Iyo miromo inofanirwa kuve yakasimba kukamirwa pamusoro pekacheche kuruma.
Zvikanganiso: Musoro wakasindimara kana kuremerwa kuti muviri uratidze padiki. Mhosho huru imhino yechando (pink mitsetse). Kuruma kwakatwasuka kana kuyambuka chigero chikanganiso imhosva.
ZVINOKOSHA: Mhino chero rakazara ruvara kunze kweye nhema kana chokoreti mune iyo imbwa yakatsvuka-yakavharwa imbwa.
Muzzle - Yehurefu hwepakati, kureva kuti, kureba kubva kumucheto wemhino kusvika pakumisa kwakaenzana nedaro kubva pakamira kusvika kune occiput kana zvishoma zvishoma semumatatu-masere emusoro. Iyo yekumira yakanyatso tsanangurwa asi haina kutaurwa uye inofanirwa kutsvedza mukati mehenya.
Zambuko rakatwasuka kubva pakumisa kusvika kumusoro. Iyo tomu ndeyehupamhi hwehupamhi, ichitenderedza zvishoma nezvishoma kumhino, netipi haina kunyanyo kunongedzera kana kupfupika uye kukwere. Iyo miromo yakanyatso kuvezwa uye yakavharwa zvakakodzera, mazino anovhara mune chigero kuruma.
Zvikanganiso: Muzzle ingave yakanyanyisa kupinza kana yakanyanya kuwanda, ipfupi kana kureba, isina kukwana kana yakamira kumira; chero kuruma kunze kwechigero.
KUSVIRA: - Yakawandisa kana yepazasi shaya.
Mhuno - Dema kana chokoreti muimbwa dzvuku.
Nzeve - Pakati pehukuru kusvika padiki kukura asi muchiyero, chakatenderera muchimiro, chakavhara chakaringana uye chakasimudzwa kumusoro pamusoro. Iwo makobvu, akasvinwa-furred, akamisikidzwa zvishoma kumashure, uye akasimba akasimba, aine mativi akapoteredzwa akataridza akananga kumusoro uye kuita kunge gava.
Nheyo yemukati yenzeve inofanira kunge yakatwasuka kubva pakati nepakati pamupendero weziso rega rega.
Zvikanganiso: Nzeve dzakakura kwazvo pakuenzana nemusoro, dzakafara-seti; isina kusimba yakasimba kana chero ruvara rwakapesana kana kwete zvimwe kunze kweruvara rwakapesana pane rwasara muviri.
KUSVIRA: Nzeve dzisina kumira zvakanaka.
Kuvhiya kweCosmetic hakubvumidzwe kunze kwekunge madonhwe edova achibviswa.
Ruvara - Mavara ese kubva mutema kusvika kune akanyanya kuchena, anodyiwa mumatanho akasiyanasiyana, uye ese machena anogamuchirwa chero bedzi imbwa isiri albino. Imbwa chena dzese dzinofanirwa kuve kirimu pane chena uye hazvitenderwe kuberekana neimwe imbwa chena.
Makisi pane ese mativi emuviri anofanirwa kuoneka kunge akaenzana uye anofadza ziso. Mhando dzakasiyana dzekumaka dzakajairika, zvisinei, mativi ese anofanira kuonesa imwe. Iyo miromo inofanira kuve nhema kunze kwekunge iri imbwa tsvuku, ipapo miromo inogona kunge iri chokoreti.
ZVINOKOSHA: Cape chena. Chero mamaki pajasi asina kuenzana. Imbwa yemhando ipi neipi yakasimba inokonzeresa kuti ive nemasikisi uye / kana kusaenzana neruvara pamakumbo uye pasi pechimedu kunze kwembwa chena iyo inofanirwa kuve kirimu pane chena uye isiri albino.
Anopatsanurika mavara akasiyana pese pajazi (kunze kwemeso, moto uri pakati pehuma kana tomu uye chena tip pamagumo emuswe).
Jasi reKlee Kai rakapetwa uye rinowanzoenzana nepakati pakureba kunyangwe vhudzi refu Klee Kai inogamuchirwa zvakakwana, ichipa chitarisiko chakakora zvine mutsindo, asi haina kumbobvira yareba sekuvhara runyararo rwembwa yakachena.
Iri jasi rakapfava uye rakakora uye nehurefu hwakaringana kutsigira jasi rekunze. Mvere dzekuchengetedza dzejasi rekunze dzakatwasuka uye dzakatsetseka-dzichiita, hadzimbomira nehasha kana kumira dzakatwasuka kubva pamuviri. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kusavapo kwejasi mukati mekudonha mwaka kwakajairika.
Kuchekesa hura hwemakumbo uye pakati pezvigunwe kuratidza kuratidzika kwakatsiga zvinobvumidzwa. Kucheka kwehuswa pane chero chikamu chembwa hachifanirwe kuregererwa uye kunofanirwa kurangwa zvakaomarara.
Zvikanganiso: Yakareba yakareba, ine hukasha kana shaggy jasi, dhizaini yakanyanyisa kana yakapfava, jasi riri sekuvhara chimiro chembwa uye kucheka kwejasi, kunze kwekutenderwa pamusoro.
Kudzikama Hunhu hunhu hune hushamwari asi hunodzivirira dunhu nemhuri, asi zvakare hwakangwarira uye hunobuda kana hwatangwa, ndeimwe nzira yekumira kwevausingazive uye ine hukasha kune vanokanganisa vangave vanhu kana mhuka.
Anodzivirira nedzimwe imbwa. Kuvimbika kwake uye nerudo hunhu zvinomuita shamwari huru.
Neck - Yakareba pakureba, iyo ingangoita chetatu chehurefu hwomuviri, yakaomeswa uye yakatakurwa ichizvikudza yakamira kana imbwa yakamira. Kana uchifamba pane imwe trot, mutsipa unowedzerwa kuitira kuti musoro utakurwe kumberi kumberi.
Zvikanganiso: Mutsipa wakapfupika uye wakakora; mutsipa wakarebesa.
Mapfudzi - Bandauko repafudzi rakanyatsogadzikwa kumashure pakona ingangoita makumi mashanu nemashanu kusvika pasi. Iyo yekumusoro arc inokona zvishoma kumashure kubva pakatarisana nefudzi kusvika kugokora uye haimbofi yakatarisa pasi.
Iyo mhasuru nemisungo inobata bendekete kune mbabvu yakasimba uye yakanyatsogadzirwa.
Zvikanganiso: Mafudzi akajeka; mafudzi akasununguka.
Chest Yakadzika uye yakasimba inodzidziswa muscled asi isiri yakafara, poindi yakadzika iri kumashure uye zvishoma pamusoro pegokora kune imwe hafu yedaro kubva kuoma kusvika pasi.
Mbabvu dzakanyatso kubuda kubva kumuzongoza asi dziri zvishoma pamusoro pegokora kusvika pahafu yehafu yedaro kubva kuoma kusvika pasi. Mbabvu dzakabuda zvakanaka kubva musana asi dzakatenderedzwa zvishoma kumativi.
Zvikanganiso: Chipfuva chakanyanyisa, 'mbabvu dzembiya,' mbabvu dzakapetana kana kusasimba.
Kudzoka - Musana yakatwasuka netopline yepamusoro kubva kuoma kusvika pakukora. Kureba kwemuviri kubva kune sternum kusvika kumagaro iri inch kana maviri akareba kupfuura aoma pasi.Ingave isiri cobby kana kunonoka kubva pakuve wakareba mumuviri.
Chiuno chakashongedzwa uye chakaonda, chakadzikira zvishoma pane chembabvu, uye nekakwirika. Iyo croup yakatsvedza kubva musana pakona, asi haina kumbobvira yakamira zvakanyanya sekudzivirira iyo yekumberi yekusundira yemakumbo ekumashure. Mune chimiro, ndeyehurefu hwepakati zvichipa chinenge chakatenderedza chitarisiko.
Zvikanganiso: Kushaya simba kana kunonoka kudzoka; roached back; kutsvedza kumusoro.
Forelegs - Kana yakamira uye ichionekwa kubva kumberi, makumbo akapatsanurwa zvine mwero, akaenzana uye akatwasuka, aine magokora padyo nemuviri uye haana kutendeuka kana kupinda mukati. Inoonekwa kubva padivi, pasterns inotsvedza zvishoma, ine pastern joint yakasimba, asi inoshanduka.
Bonzo rakakura asi harina kurema kana kusimba. Kureba kwegumbo kubva kugokora kusvika pasi imwe hafu kana zvishoma pasi pehafu yedaro kubva kuoma kusvika pasi ichitadza chete kusvika pakureba zvishoma mugumbo.
Madonhwe etsoka pamakumbo epamberi uye pamakumbo echeshure anogona kubviswa.
Zvikanganiso: Pasaka isina kusimba, inorema pfupa; yakamanikana kana yakafararira kumberi; magokora akatendeuka kupinda kana kunze. Mapfupa akaderera uye asina kusimba kutaridzika kuitira kushora nhaka yeSiberian Husky. Yakareba yakareba mugumbo kuitira kuti itaridzike kunge stilts.
Hindquarters - Kana yakamira uye ichionekwa kubva kumashure, makumbo ekumashure akapatsanurwa zvine mwero uye akafanana. Iwo mahudyu ekumusoro akanyatsosungwa muscle, iwo anomisikidza mushe-akasungwa, hock joint yakanyatso tsanangurwa uye yakagadzika pasi pasi. Dewclaws (kana paine) inofanira kubviswa.
Mufananidzo wakazara weimba yekumashure unofanirwa kuratidza huwandu hwesimba sezvo Klee Kai yakatanga kugadzirwa kubva kumarudzi anoshanda eArctic matunhu.
Zvikanganiso: Yakatetepa kana yakafararira kumashure.
Zvikanganiso zvakakura: Yakatwasuka stifles uye mhou hocks.
Tsoka - Oval muchimiro, asi kwete refu. Iyo paws idiki muhukuru asi haina kusimba kutaridzika, kuumbika uye kwakakora-pakati pakati pezvigunwe nepad s. Mapedhi acho akaomarara uye akasimba akasungwa. Iwo makumbo haatendeuke mukati kana kunze kana iyo imbwa iri muchimiro chechisikigo.
Zvikanganiso: Zvigunwe zvakapfava kana zvakapetwa, zvigunwe zvakakurisa uye zvakaomarara, zvigunwe zvakanyanya kusimba, zvigunwe mukati kana kunze.
Muswe - Muswe unofanirwa kureba zvine mutsetse uye muswe pfupa rinogumisira kureba zvishoma pane hock painenge iri pasi, asi pakureba zvakaringana kukombama pamusoro peshure uye ichiri kubata musana. Inofanira kunge yakafukidzwa zvakanyanya nevhudzi refu.
Zvikanganiso: Muswe unomira chete.
Machende - Imbwa dzechirume dzinofanirwa kunge dzaive nadzo, uye dzakakwanisa kuchengeta matete maviri ari musaga kunze kwekunge paitika tsaona nekukonzera imbwa kurasikirwa neimwe kana kupfuura. Chokwadi ichi chinofanirwa kuve chakanyorwa neVet.
Zvikanganiso: Hokore yakapetwa kaviri kana kuradzika yakati sandara kumusana. Mutongi anofanira kuona muswe kumusana kamwechete kamwe panguva yemakwikwi.
ZVINOKOSHA: Muswe usina kureba zvakakwana kuti ukombere kuti ubate musana.
Gait - Iyo Klee Kai's hunhu gait ndeyekutengesa kana kuita semhembwe. Makumbo emberi nemakumbo eshure zvinotakurwa zvakatwasuka zvichienda kumberi, pasina magokora kana zvigumbuso zvakatenderedzwa kana kubuda. Ipo imbwa ichienda, iyo yepamusoro inoramba yakasimba uye yakati rebei.
Zvikanganiso: Lumbering kana anokunguruka gait; kuyambuka, kana kukwikwidza.
Hwakakosha hunhu hwehukama muKlee Kai matoyi ekukura muhukuru, ichiita dzimba mbiri dzakakura nembwa dzemakumbo, diki pfupa rakaringana zviyero, kureruka uye rusununguko rwekufamba, rakakodzera jasi, rinofadza musoro nenzeve, chimiro chekuseka nguva dzekutamba, dzakakombama gava-kunge muswe, hunhu hwakangwara uye hunhu hwakanaka hwemhuri.
Chero kutaridzika kwepfupa rakawandisa kana huremu, yakamanikana kana yakasindimara gait, kana refu, isina jasi rinofanira kurangwa. Mune vese varume kana vakadzi Klee Kai inopa chitarisiko chekukurumidza asi kwete chakareruka uye chisina kusimba sekuratidza kumhanya-mhanya mhuka.
Ndiye muvhimi; shiri, squirrels, mbeva, nezvimwewo uye akangwara zvakakwana kukunda chero zvikanganiso zvake senge saizi, kumhanya, nezvimwe.
Pamusoro pemhosho dzakatocherechedzwa, zvikanganiso zviri pachena zvakajairika kumarudzi ese hazvidiwe muKlee Kai sekune rumwe rudzi, kunyangwe zvisiri kutaurwa pano.
PUPPIES: Mbwanana dzinotongwa zvakanyanya padanho revanhu vakuru sezvinobvira. Kunze kwekunge mwana wacho ari mutema uye muchena zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vana Klee Kai havawani vara ravo revakuru kusvika angangoita mwedzi mitanhatu yekuzvarwa.
Kuwanda kwejasi haisi iro remunhu mukuru kwegore rimwe chete. Dzimwe nguva ruvara rwuri pasi peziso rucharatidzira padyo kusvika kune gore rimwe chete. Muswe wembwanana unogona kuchinja zvakanyanya kana jasi revanhu vakuru rikapinda.
Iyo mask; zvisinei, inofanira kunge iri munzvimbo kare. Mbwanana dzechirume dzinofanirwa kuve nemachende ese ari muhomwe inokwana nemwedzi mitanhatu yekuzvarwa.
Goridhe Retriever Pitbull Sanganisa - Izvo zvaunoda kuti uzive
nzira yekugadzira mabhokisi ewhelping
sarudza rudzi rwembwa nemaitiro
yakawanda sei teacup yorkie
imbwa hadzi mazita echihuahuas